Update झाडापखालाका बिरामीको संख्या चार सय नाघ्यो,एक महिलालाई नेपालगञ्ज रिफर - Tulsipur Khabar Update झाडापखालाका बिरामीको संख्या चार सय नाघ्यो,एक महिलालाई नेपालगञ्ज रिफर - Tulsipur Khabar
Update झाडापखालाका बिरामीको संख्या चार सय नाघ्यो,एक महिलालाई नेपालगञ्ज रिफर
तुलसीपुर,१३ जेठ ।
दाङको शान्तिनगर गाउँपालिकामा एक्कासी फैलिएको झाडापखालाबाट चार सय बढि बिरामी परेका छन् । गयराति सम्म ४ सय १९ जना विरामी परेका थिए भने आज विहान देखि थप विरामी आउने क्रम जारी रहेको त्यहाबाट पत्रकार निराश पाण्डेले जानकारी दिएका छन ।
विरामी मध्ये एक जनालाई नेपालगञ्ज रिफर गरिएको छ । वडा नम्बर ३ कि डिला चन्दको नेपालगञ्जमा आईसियूमा राखेर उपचार भैरहेको जनाइएको छ । अरु विरामीहरुको अञ्चल अस्पताल , तुलसीपुर सिटी,राप्ती लाईफ र चिरेघाट स्वास्थ्य चौकिमा उपचार भैरहेको केहि विरामी भने उपचार पछि घर फर्किएको जनाइएको छ ।
दुषित पानीका कारण शान्तिनगर गाउँपालिकाको वडा नंं. ३ को पातेटाकुरा, गाहा टोल, अधेरे, गनारी र वडा नंं. ४ को एकली ,रोइनीघारी र कजेरी टोलका स्थानीय वसाीन्दामा झाडापखलाको प्रकोप फैलिएको चिरेघाट स्वास्थ्य चौकीले जनाएको छ । अहिले खानेपानी संस्थाले मुहान सरफाई गरेको छ ।
यसका साथै पानी उमालेर पिउन सुझाव दिएको छ ।